Budata FSND Boeing 727-200 maka FSX-SP2 - Rikoooo
downloads 22 267
Nke a bu umu amaala 100% FSX-SP2 FSND Boeing 727-200, ya na oke iko zuru oke siri ike. Omume na ezi ụgbọ elu nke ezigbo ndị ọkwọ ụgbọelu nwalere. Achọpụtala ọnụ ụzọ ziri ezi maka arụmọrụ ndị a na-arụ.
4 Anaputawo inlcusive: Amercian Airlines, Viasa, Northwest, Lufthansa
Add-on ezigbo mma!
Daalụ ka Alejandro Rojas Lucena ya n'ikike ego si ya na saịtị https://www.simviation.com/fsnd/
The Boeing 727 bụ, ruo ogologo oge, na airliner ụwa kasị ewu ewu. The 727 ama na nke mbụ n'ime 1963. The imewe nke 727 bụ n'ihi a ikwere n'etiti United Airlines, American ụgbọ elu na Eastern Airlines n'elu nhazi nke Boeing 707 nọchiri. United Airlines chọrọ a anọ-engine maka flights na ọdụ ụgbọelu na elu elevations, karịsịa ya nkewa n'elu ikpo okwu Stapleton International Airport. American ụgbọ chọrọ a ejima-engine ugbo elu maka arụmọrụ ihe. Eastern Airlines-enwe olileanya maka a atọ engine maka flights na Caribbean. N'ikpeazụ, atọ ụgbọ elu kwetara na a Tri, ma si otú a mụrụ na 727.
The 727 bụ oké ihe ịga nke ọma na niile ụgbọ elu na ụwa ekele ya ike adaa na mkpumkpu runways, na-eje ozi na-ajụ anya. Nke a kwere ụgbọ elu na-adọta ndị njem si n'ọtụtụ obodo nwere ọdụ ụgbọelu ma nta n'ebe mba ndị njem nleta ebe.
Otu n'ime ihe ndị na nyere 727 ya ike adaa na mkpumkpu runways bụ pụrụ iche imewe nke nku ya. Site n'inye nkenye ọnọdụ nke flaps na trailing n'ọnụ, ndị 727 nwere ike fọrọ nke nta okpukpu abụọ ya amị elu, nke kwere ka ọ ofufe na-akwa kwụsie ike na nnọọ ala gbapụrụ ọsọ Source Wikipedia
Onye edemede: Alejandro Rojas Lucena
Boeing C-32 Air Force abụọ USAF FSX & P3D
Nchịkọta mkpo XriesX Liveries maka B180-737 FSX & P3D